China MZF Magnetic Drive ပန့်ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | damei kingmech စုပ်စက်
အရွယ်အစား: DN25 ~ DN400
စွမ်းရည်: ~ 2000m3 / h
ဦး ခေါင်း - ~ ၂၅၀ မီလီမီတာအပူချိန် - ၂၅၀ less အောက်အောက်
ဖိအား: 2.5MPa ~ 10MPa
ပါဝါ - ~ 560kW
ပစ္စည်း - သံမဏိ၊ သံမဏိ ၃၀၄ / ၃၁၆ / ၃၂၁ / ၃၁၆Ti / 904L၊ Duplex၊ Hastelloy၊ တိုက်တေနီယမ်နှင့်တိုက်တေနီယမ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
1. စင်မြင့်တစ်ခုတည်းစုတ်ယူခြင်း, ။ဦးဖွဲ့စည်းပုံ
2.MZF သံလိုက်စုပ်စက်သည်ဗဟိုတံတားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲလုံးဝယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲသံလိုက်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့်မောင်းနှင်ကာသံလိုက်အားဖြင့်မောင်းနှင်သောမိသားစုဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သံလိုက်နားချင်းဆက်မှီခြင်းနှင့်လျှောစမ်တို့အားချောဆီနှင့်အအေးခံရန်အလတ်စား၏အတွင်းပိုင်းလည်ပတ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ အတွင်းပိုင်းလည်ပတ်မှုသည်မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းလည်ပတ်မှုနှင့်ဖိအားနည်းသောလည်ပတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ မြင့်မားသောဖိအားအတွင်းပိုင်းစောင်ရေစုပ်စက်သည်အငွေ့ပျံရန်လွယ်ကူသောအလတ်စားအတွက်သင့်လျော်သည်။ အနိမ့်ဖိအားပြည်တွင်းရေးစောင်ရေစုပ်စက်eမဟုတ်သောအလတ်စားများအတွက်သင့်လျော်သည်ကျောက်တံတား အငွေ့ပြန်သည်။
4. အန္တရာယ်ရှိသောအရည်ပန့်များတပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မည် နှစ်ဆနှင့်အတူ အက shell, ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးထိန်းချုပ်မှု shell ကိုပေါက်ကြားသည့်အခါဒါဟာနှိုးဆော်သံဖြစ်လိမ့်မည်။
သံလိုက်စုပ်စက်၏သံလိုက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရှားပါးဒြပ်စင်တည်ငြိမ်သောသံလိုက်ပစ္စည်း - ရှမာရီယမ်ကိုဘော့ဖြစ်ပြီးအပူချိန် ၄၀၀ မှ ၄၅၀ အထိမကြာမြင့်မီပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ℃ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူသံလိုက်ချိတ်ဆက်မှုကိုအပြည့်အဝအာမခံသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအခါသံလိုက်အိမ်ချင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးဆင့်သောသော induction motor သည်တစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ဘာ''ထို့အပြင်အမြဲတမ်းသံလိုက်သည်တည်ငြိမ်မှုအလွန်မြင့်မားပြီးအမြင့်ဆုံး torque တွင်အလုပ်လုပ်သော rotors သို့မဟုတ် pump ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
၇။ အလုပ်လုပ်စဉ်သံလိုက် pump ၏ axial force သည်ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအားဖြင့်အလိုအလျောက်ထိန်းညှိပေးသည်။ thrust disc သည် pump သည် start နှင့် stop သောအခါလက်ငင်း axial thrust ကိုသာခံသည်။
သံလိုက်ပန့်သည်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုရရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်တောက်ပသော၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ မီးလောင်လွယ်သော၊ ပေါက်ကွဲနိုင်သော၊ စျေးကြီးသောသို့မဟုတ်လွယ်ကူသောဓာတ်ငွေ့ရည်ကိုလွှဲပြောင်းရန်သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင်သံလိုက်စုပ်စက်သည်လေထုအတွင်းရှိမြင့်မားသောအပူချိန်၊ အပူချိန်နိမ့်သည့်အရည်နှင့်အရည်တို့ကိုသယ်ဆောင်ရန်သင့်တော်သည်။
ရှေ့သို့ API610VS6 Pump TDY ပုံစံ
နောက်တစ်ခု: ငါ့သံလိုက် Driven Pump
MG သံလိုက် Driven Pump
MMC သံလိုက် Driven Pump